Flim2MM: The Green Mile (1999)
Frank Darabont က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး မင်းသား တွမ်ဟင့် ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်း စာရေးသူ တစ်ယောက် ဇာတ်ကားဟောင်းတွေချည်းပဲ ရီဗျူး ရေးနေတယ်လို့ ထင်စရာပါ။ ကားဟောင်းတွေ ဆိုပေမယ့် ကားကောင်းတွေ ချည်းပါပဲ။ တွမ်ဟင့်ပါတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ ကားဖြစ်တာကြောင့် အတော်ကို ကြာနေခဲ့ပါပြီ။ ဇာတ်ကား ဟာ အော်စကာ လေးဆု စာရင်းဝင် ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကား ဖြစ်တာကြောင့် ခုလို ပြန်ပြီး နောက်ကြောင်း ပြန်လှန် တယ်ဆို လည်း မှားတယ် မဆိုးပါဘူး။ အကျဉ်းထောင်အရာရှိ ပေါလ်အဖြစ် တွမ်ဟင့်က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သူက သေမိန့်ချခံရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ထားရှိရာ ထောင်ရဲ့ အရာရှိ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ဲJohn Coffey အဖြစ် Michael Clarke Duncan က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သူက လူမမည် မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်လို့ သေမိန့်ကျဖို့ အကျဉ်းထောင်ကို ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုအမှုနဲ့ ရောက်လာပေမယ့်လည်း လှူုဘီလူးကြီးအရွယ်ရှိတဲ့ ဂျွန်ကော်ဖေးက အမှောင်ကို ကြောက်တတ်သူ စိတ်အားငယ်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ စိတ်စွမ်းအင် တစ်မျိုး ရှိတာကို တွမ်ဟင့်က သတိထားမိသွားပါ တယ်။ နောက်ပြီး ဂျွန်ကော်ဖေးဟာ စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာလည်း သတိထားမိတယ်။ သူဟာ အဲလိုသတ်တဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ အမှန်တကယ် ဂျွန်က သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ မှားယွင်း စွပ်စွဲခံသူ တစ်ဦးပါ။ ပေါလ်ရဲ့ ရောဂါကို ဂျွန်ကော်ဖေးက စိတ်စွမ်းအင် နဲ့ ကုသပေးခဲ့လလို ဂျွန်ကော်ဖေးရဲ့ စိတ်စွမ်းအင်နဲ့ ပေါလ်ဟာ သူ့အထက်အရာရှိရဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ရောဂါကို ပါ ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာ စိတ်စွမ်းအင်နဲ့ ရောဂါတွေ၊ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ မစ္စတာဂျန်ဂယ်ဆိုတဲ့ ကြွက်ကလေးကိုလည်း ပျောက်အောင် ကုသပေးနိုင်ခဲ့သလို အနီး နားဝန်းကျင်က ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ၊ ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကို ကြိုတင်သိရှိသူပါ။ ဂျွန်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး စကားကတော့ ” I am sorry what I am”ပါ။ လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရင်း ပြောသွားတဲ့ သူ့ရဲ နောက်ဆုံး စကားပါ။
ဂျွန်မှာ အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာ သိတဲ့အတွက် ပေါလ်တစ်ယောက် ဂျွန်ကို ထောင်က ပြေးမလားမေးခဲ့ပါတယ်။ သူတာဝန်ယူပြီး ကူညီပေးမယ့်သဘောပါပဲ။ ဂျွန်က ပေါလ် ဒုတ်ခဖြစ်မယ့် အကြံအစည်ကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ သေမိန့်ပေးတဲ့ လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ကိုပဲ ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
ဒီဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးက သရုပ်ဆောင်တွေ အားလုံးဟာ အပိုအလိုမရှိ သရုပ်ဆောင်သွားတာ တော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားတဲ့ ပါစီရဲ့ အမူအရာကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ပါစီက သူတစ်ပါးကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်မှ စိတ်ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ပါ။ တွမ်ဟင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားလည်း အမူအရာ ပီပြင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကို လူမည်ကလေးမ ၂ ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်သူလည်း ဖြစ်၊ အခြားသော လူသတ်မှုတွေလည်း ဆက်တိုက် ကျူးလွန်ခဲ့သူလည်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားသူလည်း အမူအရာ ကောင်းပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - မိုတေး
[FORMAT]:………………………….:[ 720p DVDRip x264
[GENRE]:………………………… .:[ Crime, Drama, Fantasy
[FILE SIZE]:……………………….:[ 1 GB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[3h 09mins
Posted by Y Junction at 8:17:00 AM
Labels: Crime, Drama, Fantasy, Hollywood